UGinny kunye neGeorgia-Isizathu sempumelelo enkulu kuthotho lweNetflix | IBezzia
USusana godoy | 06/04/2021 14:00 | Iindaba
Kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo, i uthotho 'uGinny neGeorgia'. Nangona mhlawumbi ekuqaleni ingakhange iqale njengenye yeentandokazi ezinkulu ukuba ibe yimpumelelo, injalo. Ngexesha elifutshane kakhulu ibekwe phakathi kwezona zijongwa kakhulu eqongeni.
Ke ngoko, ineebrashi ezininzi zokubakho uthotho lwakho olutsha oluthandayo. Ngaba sele uyibonile? Ukuba kunjalo, uya kuyazi kakuhle le nto ndithetha ngayo kwaye ukuba akunjalo, usenokuyifumana kwaye uzame. Isitayile esiphambeneyo sebali kodwa ngamahhuku amaninzi akhonkco.
1 Ubudlelwane umama omncinci kakhulu anabo nabantwana bakhe
2 Ibali emva komama oneemfihlo
3 Ukufikisa kunye neengxaki zako
4 Uthando lobudlelwane 'eGinny naseGeorgia'
Ubudlelwane umama omncinci kakhulu anabo nabantwana bakhe
Inyaniso yileyo ubudlelwane umama, uGeorgia, anabo nabantwana bakhe yinto ethi gxuma ngaphandle xa uqala nje. Njengaye nawuphi na umama okanye utata, ubapha yonke into kodwa kuyinyani ukuba uyagqitha. Ngenxa yokuba olo lwalamano lwabahlobo esilufunayo sonke noomama okanye iintombi zethu, ngoku kubonakala ngathi luza ebomini. Ngapha koko, ngamanye amaxesha izigqibo zentombi zichaphazela abantu abadala ngakumbi, xa ihlala ichasene. Siza kuyifumana inkululeko epheleleyo ngokubhekisele kubuhlobo kunye nobudlelwane bosapho, into esithanda ukuyibona kwisiqendu sokuqala, nangona konke oku kuya kuvela. Kuba ngasemva kolu lwalamano kukho okungaphezulu kokufihlakeleyo okumnyama nobunzima.
Ibali emva komama oneemfihlo
Yonke into inenqaku lomanyano kwaye ke, kubudlelwane bukamama nentombi, nayo. Oku kuthetha ukuba ukuba ulwalamano lunjalo, luya kuba yinto ethile. Mhlawumbi kungenxa yokuba umama wayenentombi yakhe encinci kakhulu, ehamba ngeedrama ezithile zosapho ezazimlungisa endleleni yakhe. Ke, xa intombi uGinny efumanisa into efihliweyo ngunina, akamxoleli okanye kubonakala ngathi. Kodwa kuyinyani ukuba kusekho okuninzi ekufuneka ukwazi ukuze ukuqonde. Iimfihlo ziya kutyhilwa ngohlobo lokuxhuma exesheni. Ukuze ngale ndlela, siyiqonde kakuhle ingxoxo ngokwayo.
Ukufikisa kunye neengxaki zako
Ukongeza kwiimfihlelo kunye nobudlelwane phakathi kukamama nentombi, uthotho lweNetflix 'uGinny kunye neGeorgia' lukwanazo needrama zolutsha. Ubudlelwane bokuqala bezesondo, ukuthanda okuzayo kunye nexabiso lobuhlobo kunye nokuphazamiseka okuthile. Kubonakala ngathi usukuzwano kunye nokuvuthwa nako kungqubana ngokupheleleyo kuthotho olunje. Ke, i-priori, umntu unokuthetha kakuhle ngothotho lolutsha, nangona okwangoku kugubungela okungaphezulu kunokuba sinokucinga. Kukho intetho yokufana okuthile kunye nolunye uthotho ukuba kwilixa elidlulileyo libe nempumelelo enkulu kwaye alikho elinye ngaphandle kwe 'Gilmore Girls'.
Uthando lobudlelwane 'eGinny naseGeorgia'
Kungenxa yokuba ayizizo zonke izinto ezaziza kuba ngumdlalo weqonga 'eGinny naseGeorgia', ikwanokuchukumisa umdlalo ohlekisayo kunye nemixholo yothando. Into edlula phakathi kukamama nentombi, nganye nganye inekamva elingaqinisekanga. Nangona kuyinyani ngamanye amaxesha sinokucela ukuba intombi ikhule ngakumbi kunonina. Ukuwa eluthandweni kunye nobudlelwane bokuqala bezesondo zezinye zeengongoma eziphambili. Imixholo edlalwa ngendalo iyonke kwaye isinceda ukuba siqonde umlinganiswa ngamnye ngakumbi. Ke emva kokonwabela ixesha lokuqala, umbuzo obuzwa ngumntu wonke ngulo: Ngaba iNetflix iya kuyivuselela 'iGinny neGeorgia' kwixesha lesibini? Ndiqinisekile ukuba ngempumelelo enayo, siza kuyazi into elungileyo kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Isizathu sokuphumelela kothotho lwe-'Ginny neGeorgia 'kwiNetflix